Wararkii Hore Ka raadso
Search Here Links
WARBIXIN: Wada-hadalka Somaliland iyo Soomaaliya – W/Q. Cabdi M. Saleiman (Mingiste)
Written by: Daa`uud
Published: 24/01/2013 @06:23 WARBIXIN: Wada-hadalka Somaliland iyo Soomaaliya – W/Q. Cabdi M. Saleiman (Mingiste) Somaliland: “Gooni isu taaga Somaliland waa muqadis” – Soomaaliya:”Midnimada Soomaaliya waa muqadis”
Erayo u baahan la fahmo:-
Soomaaliweyn:- Erayga “Soomaaliweyn”
waxaana looga jeedaa 5ta Soomaaliyeed ee (Somaliland, Soomaaliya, Jabuuti, Soomaali Galbeed, NFD.
Muqadis:- Waxaa muqadis ah Diinta,waxaa kaloo la soo raaciyaa dhulka.Ma jiraan wax kale oo muqadis ah.
Midowgii 1960 :- Waxaa loola jeedaa is raacistii Somaliland oo xoriyadeeda ka qaaday Ingiriiska 26 Juun 1960 iyo Soomaaliya oo xoriyadeeda ka qadatay Talyaaniga 1 July 1960.
Midnimo Soomaaliyeed ;- Waxaa loola jeedaa in laysla raadiyo sidii 5ta Soomaaliyeed laysugu keeni lahaa,ee macnaha midnimo Soomaaliyeed ma aha — Somaliland iyo Soomaaliya oo dib u midooba .
Qarannimo :- Wadan kasta qarannimadiisu waa u gaar, Somaliland qarannimadeedu waa u gaar, Soomaaliyana qarannimadeedu waa gaar.
Federaal ;- Waxaa noqon kara oo keliya Somaliland iyo Soomaaliya.Federaalku ma noqon karaan Koonfurta Gaalkacayo iyo Woqooyiga Gaalkacayo—Jowhar iyo Marka,Baydhabo iyo Kismaanyo.
Maxay Soomaalida ka dhexeeya(wadaagto).
1. Asalka:- Soomaalidu waa dad isku isir ah ,asal ah,isku qoysna ka soo wada jeeda.
2. Midabka :- Guud ahaan Soomaalidu waa dad isku midab,mana laha midabo kala duwan.
3. Diinta:- Shacabka Soomaaliyeed 100% waa dad Muslim ah,meelkasta oo ay degan yihiinba.
4. Luqada:- Soomaalidu waa isku Af(Luqad),mana jiraan luqado kala duwan oo laga hadlo dhulka ay Soomaalidu degto.
5. Dhaqanka:-Guud ahaan Soomaalidu waa dad isku dhaqan iyo cado .
6. Degaanka:- soomaalidu waa isku deegaan,mana kala googona dhamaanteed,mana jiraan ummaddo kale oo dhex degan amase kala googooya.
Waxyaabaha Soomaalidu ku kala duwan tahay?
Qaybintii Gumaysiga: – Sidii Gumaysigu u qaybiyey Soomaalida ayaa waxay raad weyn ku reebtay Siyaasada guud ahaanba dhulka ay Soomaalidu tegto,waxaana sababaha keenay in ay Soomaalidu u qaybsanto 5 qaybood oo kala ah (Somaliland –Soomaaliya—Jabuuti—Soomaali Galbeed iyo NFD)
Siyaasada;- Soomaalidu xilligan waxay aad iyo aad ugu kala qaybsan tahay dhinaca Siyaasada,Waxaa kala go,ay dhulkii Soomaaliya laysku odhan jiray, u kala goay Somaliland iyo Soomaaliya, Soomaaliyana waxay u sii kala googoday Maamulo kala duwan, sida Puntland—Galmudug IWM.
Xeerarka qabiilooyinka :- Soomaalidu waxay ku kala duwan tahay habka Qabiilooyinka Soomaalidu u Xeer sameystaan,qaar badan oo ka tirsan Qabiilooyinka Soomaalidu kama dhexeeyaan Xeer hoosaadyo Qabiil,sababtoo ah Xuduud dhul ma laha.
Istixgelinta Qabiilka:- Qabiilooyinka ay Xeerka iyo Xuduuduhu ka dhexeeyaan aad iyo aad isu tixgeliyaan, dhibta dhex martana si fudud ayey u dhameeyaan.Qabiilooyinka aan Xuduud iyo Xeerka wadaagin runtii aad iyo aad ayey u adag tahay xalinta dhibka ka dhex dhaca.
Shaqada:- Habka ay u shaqaysato guud ahaan Soomaalidu way ku kala duwan,laba shaqo ee ugu waaweyn ee Soomaalidu taqaanaana waa Beeralay iyo Xoolo dhaqato.
Ajandaha Shirka Somaliland iyo Soomaaliya:- Ajadaha wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ku dhexmaraya dhowaan wadanka UK,saddex arimood mid uun buu noqon karaa:-
1. Kala goid
2. Midnimo Qaran.
Aynu wada hadalo–waa aynu heshiino, wada hadalku waa habka ugu fudud ee lagu dhameeyo mushkiladaha dhex mara baniaadanka ku nool dunidan guudkeeda.Marka laga hadlayo erayga wada hadal, wuu noocyo badan yahay,laakiin kan hadda aynu ka hadlayaa waa “wadahadka Siyaasadeed” (political dialog)oo dhex maraya labada wadan ee Somaliland iyo Soomaaliya.
Guud ahaan ummadda ku abtirsata magaca Soomaali,waxay hide iyo dhaqan soo jireen ah u leedahay wada hadalka,waa habka ugu fudud ee ay isku afgarato,waa habka ugu wanaagsan ee ay ku xaliso dhamaan noocyada khilaaf ee soo kala dhex gala,Somaliland iyo Soomaaliyana way ku saxsan yihiin in ay wada hadal ku dhameeyaan khilaafka Siyaasadeed eev ka dhexeeyey in ka badan 21 sanadoon,waa wado sax ah,laakiin mar kasta ogsoonoow khilaafkani waa mid Siyaasadeed,wuxuuna leeyahay wejiyo aad aad u kala duwan, aad u kala fog,oo intooda badani qarsoon tahay.
Go,aanadii ka soo baxay Shirkii ka dhacay London 23 Feb 2012 ,waxaa ka mid ahaa Qodobka 6aad oo dulucdiisu ahayd in ay Soomaaliya iyo Somaliland ,wadahadal Siyaasadeed yeeshaan,Q6 ma sheegayn xilliga ay wada hadlayaan,meesha ay ku wada hadlayaan, waxa ay ka wada hadlayaan iyo cida goob joog ahaan uga qayb qaadanaysa wadahadalka midna
Shirkii Feb 23 dii 2012 , London loogu qabtay dhamaan Dowladaha iyo Maamulada ka jira dhulkii hore Soomaaliya laysu odhan jiray,markii uu dhamaaday isla maalintii 23kii Feb ,waxaa laga soo saaray war murtiyeen ka kooban 26 qodob lana odhan karo dhamaantoo waxay ahayeen qaar quseeya guud ahaan dhulkii Soomaaliya laysku odhan jiray xilliyadii hore.
Dhamaan ergooyinkii ka qayb galay Shirka ,oo ka kala socday Soomaaliya, Somaliland,Puntland,Galmudug iyo Ehlu Sunna Wa Jamaaca, dhamaan waxay muujiyeen farxad iyo rayn rayn badan,waxay dhamaantood ku celceliyeen in Shirkii London ka dhacay ay guulo waaweyn,wax ku ool ah,la taaban karo,waxtarweyn u leh bulshadooda ay ka soo hooyeen,kalana soo guryo noqdeen,waa lagu soo dhoweyeey,waana loogu dabaal degay dhamaantood.
Haddaba waxaan intii ka dambaysay 23 kii Feb ,aad iyo aad u isu deyey in aan xog buuxda ka helo,sababta cid kasta oo Shirkii London ka qayb gashay ay u sheeganayso in ay guul weyn ka soo hoysay,waxaa doonayey in aan ogaado bal noocyada guulaha Shirka ka soo baxay,waxaan la sheekaystay shaqsiyaad dhowr ah oo runtii waayo aragnimo weyn u leh xalada siyaasaeed ee Geeska Afrika xilligan.Marka laysku soo wada duubo guulaha cid waliba ka sheegtay Shirkii London 23.Feb 2012 waxaa lagu soo koobi karaa :-
Somaliland waxaa loo sheegay,,si fiican loogu tilmaamay wadada ay u marayaan,halka laga helayo ee uu yaalo aqoonsigii 21 sanadood ay badi doonka ugu jiray.Waxaa loo tilmaamay wado dhow oo ay u mari karaan aqoonsi buuxa iyo midnimo Soomaaliweyn hadba kii ay doonayaan,waa sababta keentay in Waftigii Somaliland uga qayb galay Shirkii 23 Feb 2012 ka dhacay London ay inoo sheegaan in ay ka soo hooyeen guulo waaweyn Shirkaa, laakiin Waftigii Somaliland may fahmin in Soomaaliya la siiyey,gacanta loo geliyey awood aad u weyn oo aanay hore u haysanin “taas oo ah in aqoonsigii Somaliland ay iagu hayaan”.
Soomaaliya iyana waxaa si fudud oo Siyaasadeysan loogu tilmaamay ,wada ugu dhow ee ay u mari karaan midnimada Soomaaliya ee ay had jeer ka dhawaajiyaan in ay tahay mid “muqadis ah”,,waxaa Soomaaliya la tusay in aqoonsigii Somaliland ee ka soo horjeedeen uu gacmahooda ku jiro,waa sababta keentay farxada iyo dabaal degii ka dhacay Muqdisho,waa sababta keentay in ay sheegtaan in ay guulo la taaban karo ka soo hooyeen Shir London ka dhacay 23.Feb2012 .
Puntland/Galmudug/Ehlu Suna Wajamaac:-
Waa run oo saddexda Maamul ee Puntland,Galmudug,Ehlu Sunna waxay ka soo hooyeen guulo aad u waaweyn Shirkii lagu qabtay London 23 Feb 2012,waxaana ka mid ah guulahaas:-
1. Waxay ku qasbeen Dowlada TFG, in ay garab fadhiistaan Shirarka Caalamiga ah ee ay ka qayb gelayso, si ay indhaha ugu hayaan heshiis kasta oo ay gelayso.
2. Waxaa la meel mariyey heshiiskii, hirgalay dhamaan qodobadii Shirkii Garoowe, taasina waxay guul weyn u tahay Maamulka Puntland.
3. Waxay magacoodii gaadhsiiyeen, oo ay isbarteen Dowladihii shirka ka soo qayb galay.
4. Waxay gudihiisa galeen N0.10 Down street,halkaas oo ay ku kulmeen Raiisal Wasaaraha Dalka Ingiriiska,runtii waxay u hayd fursad qaali ah iyo guul weyn oo u soo hoyatay.
Isku soo wada duub oo Somaliland waxaa loo sheegay in aqoonsigooda ay ka baryaan Soomaaliya,Soomaaliyana waxaa loo sheegay in ay awooda aqoonsiga Somaliland uu gacantooda ku jirto, waxaa odhan karaa waxaa la siiyey awood weyn oo aanay hore u ogeyn.
Runtii waa wada hadal aad u culus, adag, qaadana kara mudo dheer, haddii loo tixgeliyo loona wajaho miisaanka siyaasadeed ee ay leeyihiin
Marka laga wada hadlayo arimo Siyaasadeed amase ay ka wada hadlayaan laba wadan arimo Siyaasadeed, waxaa aad iyo aad u muhiim ah,tixgelin weyna leh qodobadan:-
Waa in ay jiraan “mabdaiyan wixii laga wada hadlayey,(Ajadandaha) sida Xuduudo,dhul, isaqoonsi ,Shuruuc iyo Hanti ay ku muransan yihiin laba wadan,laba shacab amase laba maamul iwm.
Waxaa aad iyo aad u fiican inta badan in qorshaha wada hadalku uu cida wada hadlaysa ka yimaado,laakiin waa caadi ,ceebna ma aha in wada hadalada Siyaasadeed ay cid kale soo jeediso, amase ay soo sameyso qorshe ay idinku wada hadalsiinayaa.
Waa in aad adigu midaysan tahay,oo aadan kala qaybsaneyn,haddii aad kala qaybsan tahay waxay faaiido weyn u tahay cida aad wada hadlaysaan,goaanada soo baxana waa laga daba hadlayaa (looma dhameyn—nama metelo—kalsooni nagama haysto iwm) waa erayada ugu caansan xilligan aynu hadda ku jirno.
Cida wada hadlaysa ayaa dhex dhexaadinaya ?,yaa goob jog ka noqonaya ?,wadama idin dhexdhexaadinaysa ma ku kalsoon tihiin labadiina dhinacba ?, wadamada idin dhexdhexaadinaya dano noocee ah ayey idinka leeyihiin ?,ma dano dhaqaale,ma dano Siyaasadeed, mise dano Istiraatijeed ?.Suaalahaas iyo qaar kale oo la mid ahiba waxay u baahan yihiin in jawaab waafi ah loo helo inta aan la guda gelin wada hadalka.
Goobta lagu wada hadlayo,inta badan waa muhiim in la tixgeliyo arimaha Amaanka iyo Isgaadhsiinta,dhaqanka iyo dhaqaalahaba,sababtoo ah haddii intaa mid ka dhiman yahay waxaa dhici karta in “wada hadaladu ay hakadaan mararka qaarkood”.
Dhaqaalaha ku baxaya wada hadalka yaa bixinaya ?,waa mihiim sababtoo ah ,inta badan waxaa ku baxa wada hadalka dhaqaale badan,sababtoo goobaha lagu wada hadlayo,ilaalinta amaanka Wufuuda iyo Hotel-lada ay degaan waa goobo qaali ah.
Luqada lagu wada hadlayaa ayaa iyana aad muhiim ah,waa in aad si fiican u fahmaysaa erayada sarbeebta ah,waa in aad akhriyi kartaa famina kartaa waxaa aad saxeexayso iwm.
Waa in aad si fiican u taqaanaa Shuruucda ,sida Dastuurka iyo Xeerarka kale ee wadankaaga si aanay hadhow isaga hor imanin go,aanada la gaadho iyo Shuuracda wadanka u degsani.
Waftiga kaaga qayb gelaya wada hadalka , waa in ay fahansan yihiin miisaanka ,muhiimada iyo culayska ay leeyihiin wada hadalka ay ka qayb gelayaan,waa in ay miisaan Siyaasadeed ku dhex leeyihiin Bulshada ay metelayaan,waa in ay aqoon durugsan u leeyihiin dhaqanka iyo Siyaasada labada Bulsho ee wada hadlaya.
Waftiga kaaga qayb gelaya wada hadalada waa in noqdaan “Shaqsiyaad aan isbedel amase isrogrogid lagu aqoon,waa in ay ku can yihiin shaqsiyaad ku adag qadiyada ay metelayaan.Haddii ay yihiin shaqsiyaad si yar isu bedela,markaa waxaad ku jirtaa Qatar aad u weyn oo waa la bedeli karaa waftigii aad diratay.
Waa in aad taqaanaa Shaqsiyaadka ay soo diranayaan wadanka aad wada hadlaysaan,gaar ahaan aqoontooda Siyaasadeed ,dhaqan iyo degaanba.Markasta oo aad aqoon fiican u leedahay cida kaa soo horjeeda ,waxaa kuu fududaanaya wada hadalka,waxaa kaloo kuu sahlanaaneysa halka aad hadalka ku dhufanayso iyo sida aad u gaadhayso yoolkaaga.
Waxaa muhiim ah waayo aragnimadii laga dhaxlay dhibtan laga wada hadlayo,sida maxaa dhib ina soo kala gaadhay intii ay isku jirnay ?,maxaa faaiido ina soo kala gaadhay intii aynu kala maqneyn iwm.
Waxaa loo baahan yahay in la helo dhamaan wixii Cilmi baadhis laga sameeyey arinta laga wada hadlayo,sida qoraalo,Film ,Suugaan iwm,waxaa iyana muhiim ah Khubaradii baadhay in ay la helo haddii ay nool yihiin.
Waxaa aad iyo aad u fiican in aad sii baadhato(Xuuraanto),xogagaalna u tahay ,mawqifka ay taagan yihiin kooxda kaa soo horjeeda ee aad wada hadlaysaan.
Marka la wada hadlayo waxaa jira WAAJIBAAD aad xambaarsan tahay, waxaa kuu soo dhiibaya Madaxdaada iyo Ummadda aad wakiilka ka tahay ,waa halka aadan dhaafi Karin go,aan qaadashada ,waa halka inta badan aad maqasho waa laysku mari waayey.
Waxaa jira habka loo yaqaan TANAASUL,haddii lays mari waayo oo wadan waliba halkiisii ku adkaysto waa in laysu soo dhoweeyaa,markaa inta badan mid uun baa sameeya TANAASUL-oo macnaheedu yahay in aad iska dayso mid ka mid ah qodobadii kuugu adkaa ee Shirka laga wada hadlayey,si loo heshiiyo.
Waxaa aad u fiican in had iyo jeer ay kuu kala cad yihiin qodobada aad TANAASULKA ka samayn karto iyo qodobada ay kugu adag tahay in aad ka tanaasusho .
Haddii lays mari waayo,maxaa kaaga meel yaala,ma lagu kala kaco wada hadalka ,mise in aad debciso qodabada wada hadalka adkeeyyey.
Cida hindisaha wada hadalka lahayd/Ajandaha/Midaysnaanta cida wada hadlaysa:-
Marka laga soo bilaabo 18 May 1991 ilaa maanta Somaliland diyaar ayey u hayd in ay mar uun wada hadlaan Soomaaliya,laakiin shuruud keliya ayaa ku xidhinayd, taas oo ahayd “marka la helo Soomaaliya oo mid ah(midaysan).
Marka la wada hadlayo:-
Marka ay wada hadlayaan,laba Dowladood amase laba Maamul,waxaa aad iyo aad u muhiim ah,in marka hore lays aqoonsado,haddii aanu jirin isaqoonsiga laba dhinac ee wada hadlayaa.Aqoonsi waxaan ula jeedaa in (Somaliland iyo Soomaaliya ay isu aqoonsadaan laba Dowladood oo wada hadlaya Haddii aanu jirin ISAQOONSI laba dhinac ee wada hadlayaa,markaa heshiis kasta oo ay wada galaana wuxuu noqonayaa mid aan waxba ka jirin..
Cida Wada hadlaysaa waa Somaliland iyo Soomaaliya:-
Cida wada hadlayaa waa Somaliland oo ay metalayso Xukuumada xilligan xilka haysa,Golayaasha Sharci dejinta,Ururada Siyaasada iyo waxgaradka Somaliland.
Soomaaliya ay ka wakiil ka tahay (TFG)Dowlada ku meel gaadhka ah,Golayaasha Sharci dejinta iyo guud ahaan waxgaradkeeda.
F.G.—Maamul Goboleedyada ka jira Soomaaliya waxaa ka masuul ah,ka wakiil ah,Dowlada ku meel gaadhka ah(TFG),ee Maamul Goboleedyada iyo Somaliland wada hadal ma geli karaan.
Cida hindisaha wadahadalka lahayd:-
wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ,waxaa hindisihiisa iska lahaa kooxda loo yaqaan “ Bulshada Caalamka”,mana ahayn mid ka soo goay quluubka shacabka Somaliland iyo Soomaaliya midna.
Wada hadalka dhex mari doona Soomaaliya iyo Somaliland,waxaa uu ahaa qodob ka mid ah qodobadii shirkii London 23 Feb 2012,(Q6)qodobkiina waxay u qornaa sidan Somali/English:-
AJandaha wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya:-
Ajandaha wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya waxyaabaha ugu muhiimsan lagu waxaa lagu soo koobi karaa:-
Qaranimo/Gabanimo/Aqioonsi (Xuduud—Cirka,Dhulka iyo Badda).Waxaan ula jeedaa in aynu noqono labada Dowladood oo deris ah.
Qaladaadkii laga galay Shacabka reer Somaliland (waxaan ula jeedaa, Boobkii Siyaasadeed,dhaqaale ee loo geystay 21kii sanadood(1960-1991).
Burburintii 1960-1991), waxaa ula jeedaa Dagaaladii xasuuqa ahaa,iyo dhamaan wixii naf iyo maal burburay mudadaa.
Mideysnaanta cida wada hadlaysa mid walba goonideeda:-Somaliland:-
Somaliland waxaa maanta ka jiray muran Siyaasadeed oo waxaa furan in ka badan 18 Urur Siyaasadeed markaa waxay haboonayd in la sugo inta murankaasi dhamaanayo,oo la ogaanayo Xisbiyada ku soo baxa Siyaasada wadanka.
Waxaa muran ka jiraa geesaha Somaliland sida Sool iyo Awdal.markaa waxaa iyana muhiim ah in la xaawilo sidii marka hore loo dhamayn lahaa arimahooda.
Dowlada hadda jirta Soomaaliya waxaa xilligeedu ku egyahay bisha Aug 2012.markaa waxaa muhiim ah in la sugo cida bedelaysa iyo haddii, iyo haddii ay iyadu noo noqonaysaba.
Kooxaha/maamulada xilligan jira oo aad u fara badan, kuna kala fog xagga aragtiyaha Siyaasadeed ,markaa waxaa loo baahan yahay in la sugo Soomaaliya oo mid ah, haddii heshiis kasta oo la galo muran ayaa ka dhalan doona.(waxaynu maqli doonaa erayada ay ka mid yihiin ,looma dhamayn—nama metelaan—kasooni nagama haystaan IWM)
Hadal iyo dhamaan wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waa wada hadal adag,dheer,una baahan in loo helo shaqsiyaad ka midho dhalin kara,laba shacabka ee Somaliland iyo Soomaaliyana u soo hoyn kara guul iyo nabad ggelyo ay ku naaloodaan.
Cida dhexdhexaadinaysa Somaliland iyo Soomaaliya:-
Inkasta oo aanay weli cadayn,wadamada goob jooga ka noqonaya wadada hadalada dhexmaraya Somaliland iyo Soomaaliya ,haddana waxaa la hadal hayaa wadamada ay mid yihiin Uk,Itoobiya ,Kenya,Jabuuti,Uganda iyo wakiilka UN,ee Soomaaliya iyo ururo kale. Waxaa ogataan in wadal kasta oo Soomaaliyeed, oo ay ka soo qayb galaan wadamada Itoobiya, Kenya, Uganda iyo Jabuuti in aanu noqon doonin wada hadalo guulaysta waxaana u sabab ah:-
Wadamada aan kor ku soo sheegay iayagaa ka masuul Siyaasiyan dhibta guud ahaan Soomaalida Soo gaadhay, daacadna kama aha in guud ahaan geyiga Soomaaliyeed nabad noqdo.
Waxaa is diidan danaha ay wadamadaasi leeyihiin iyo danaha Soomaalidu leedahay, runtii waa laba aad u kal fog.
Haddii Dowladaha dhexdhexaadinayaa aanay daacad ka ahayn, arinta ay dhexdhexaadinayaa, markaa way adag tahay in heshiis laga gaadho arimihii laga wada hadlayey, qodobada wada hadalka ka soo baxaana waxay noqonayaan qodobo aan cidina ku farxi doonin, siina kala fogeeya Somaliland iyo Soomaaliya.
Goobta ay ku wada hadlayaan Somaliland iyo soomaaliya:-Waxaan maqlay in goobta lagu wada hadlayaa ay tahay Uk-London,runtii ceeb ma aha in wadan kale lagu wada hadlo,balse waxaa fiican in aad loo tixgeliyo dhowr arimood oo ay ka mid yihiin:-
Dhaqaqanka wadanka lagu wada hadlayo, oo runtii aynu aad u kala fog nahay,kala fogaanshaha dhaqankuna wuxuu keeni karaa carqalado ku yimaada wada hadalka.
Uk-waxaa ku nool Soomaali aad u fara badan,gaar ahaan Siyaasiyiin aad u kala aragti duwan,kuwaasina waxay fara gelin joogto ah ku samayn karaan wada hadalada.
Waa goob aad uga fog Soomaaliya iyo Somaliland,markaa markasta oo loo baahdo in wada tashi laysugu noqdo waxay noqonaysaa in dib loogu dhoofo Soomaaliya iyo Somaliland,taasi waxay keenaysaa qarash fara badan oo aan loo baahneyn.(In kasta oo isgaadhsiin casri ah jirto haddana waaxaa loo baahanayaa in mar mar dib laysu noqdo).
Dhaqaalaha ku baxaya waadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya:-Runtii ma garanayo cida bixinaysa dhaqaalaha ku baxaya wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya,balse waxaan filayaa in ay bixinayaa Bulshada caalamku amase Dowladihii fikirka iska lahaa. Waxaa cadahay in dhaqaalaha ku baxaya wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya uu yahay mid aad u badan, “ogaadana dunida xilligan ma jiraan wax bilaash laysu siiyaa ,haddii dhaqaalaha wada hadalka la bixiyo, Soomaalidana waxaa la doonaayaa bedelkii dhaqaalihii laga bixiyey.
Luqada ay ku wada hadlayaan Somaliland iyo Soomaaliya:-
Luqada lagu wada hadlayaa aad iyo aad ayey muhiim u tahay,sababaha ay muhiim u tahay waxaa ka mid ah:-
Waa in ay si fiican isu wada fahmaan dhamaan ka qayb galayaasha wada hadala,gaar ahaan kooxaha wada hadlay.
Waxaa qabaa in Afka hooyo uu yahay kan keliya ee dareekooda ay ku cabiri karaan dhamaan kooxaha Soomaaliyeed ee wada hadlayaa.
Waxaa aad u fiican in lagu wada hadlo Afka hooyo, si loo adeegsado maahmaaha,halkudhegyada,gabayada iyo guud ahaan suuganta Afka Soomaaliga.
Haddii luqad kale lagu wada hadlo waxaa yaraanaya is fahanka Soomaalida, waxaa yaraanaya adeegsiga suugaanta Afsoomaaliga,waxaana dhici doonta in la saxeexo wax qaldan,muran iyo sidaa umaan fahmin waa la maqli doonaa.
Hadal iyo dhamaan weli waxaad moodaa in ay kala fog yihiin Soomaaliya iyo Somaliland ,waxaad moodaa in aan weli la helin isu soo dhowaansho iyo saaxad caafimad qabta oo lagu wada hadlo midna.
Dastuurada Somaliland iyo Soomaaliya:-
Wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya, waxaa qayb muhiim ah ka qaadanaya Shuruucda amase Dastuurada (Axdi qarameedyada) ay kula dhaqmaan labada waadan .Qaybtana waxaan idiin idiinklu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah qodobada ugu adag Dastuurada Somaliland iyo Soomaaliya,kuwaas oo aan isleeyahay waxay caqab ku yihiin wada hadal kasta oo dhexmara Somaliland iyo Soomaaliya,waxaana ka mid ah:-
Dastuurka Somaliland:- (Dastuurka Somaliland ,waxaa Shacabka reer Somaliland cod buuxa ku ogolaadeen May 2001,waxaa ogolaaday in ka bada 95%,qoodobadiisa waxaa ka mid ah :-
1. Dalkii Maxmiyadda ahaa ee 26kii Juun 1960kii gobanimadiisa ka qaatay Boqortooyadii Midowday ee Ingiriiska iyo Waqooyiga Ayrland (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), lana odhan jiray Maxmiyadda Somaliland, kuna biiray Soomaliya 1dii July l960kii si ay u wada curiyaan Jamhuuriyadda Soomaaliya [Somali Republic] ee kula soo noqday gooni-isu-taagiisa Go’aankii Shirkii Beelaha Somaliland ee Burco 27kii April ilaa 15 May l99lkii, waxa uu halkan ku noqonayaa sida waafaqsan Dastuurkan dal madax bannaan oo leh xaqa iyo karaamada Qaranimadusa, kuna magacaaban “Jamhuuriyadda Somaliland”.
2. Awoodda iyo karaamada Qaranimada waxa leh shacbiga; wuxuuna u adeegsanayaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale.
1. Dalka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu fidsan yahay bed (Area) ahaan dalkii Ia odhan jirey Maxmiyadda Somaliland oo tilmaan ahaan ku yaalla dhigaha (Latitude) 50 ilaa 110 30′ Waqooyiga Dhulbadhaha iyo loolka (Longtitude) 420 45′ ilaa 490 Bariga; waxaanay soohdimihiisu ka kooban yihiin berriga1 jasuradaha, biyaha gobolleed, dhulka iyo badaha hoostooda, hawada sare iyo xeebleyda (Continental shelf).
2. Jamhuuriyadda Somaliland waxay xad Ia wadaagtaa dhinaca Waqooyi Gacanka Cadmeed; dhinaca Bari Soomaaliya; dhinaca Koonfureed iyo dhinaca Galbeed Jamhuuriyadda Federaalka ah ee ltoobiya; dhinaca Waqooyi Galbeed Jamhuuriyadda Jabuuti.
3. Dhulka Qaranku waa muqaddas; waana laguma xad gudbaan.
Magaalo-madaxda Jamhuuriyadda Somaliland waa Hargeysa
CALANKA, ASTMNTA & HEESTA QARANKA
1. Calanka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka kooban yahay saddex midab oo isle’eg oo ballaadh u goglan. Midabka sare waa Doog, dhexdiisana ay ku qoran tahay Laa-llaaha llla-Lahu Muxamedu Rasuul-Allaah oo Far-Carabi ah, oo midab cad ah; midabka dhexe waa caddaan ay badhtanka kaga taallo xiddig madow oo shan geesley ah, madaxyo simanna leh; midabka hoose waa casaan saafi ah.
2. Astaanta Qaranku waa Galaydh Bunni ah oo ay laabta kaga qoran tahay “ALLAAHU AKBAR” oo Far Carabi ah; kuna taagan laba gacmood oo is-gacan qaadaya, miisaana ka sarreeyo ay labadusa kafadood hareeraha Galaydhka ka laalaadaan. Laba caleemood oo doog ah ayaa hoosta iyo hareeraha kaga wareegsan Galaydhka; labada caleemood baarkooda inta u dhaxaysa waxa ku qoran “Bisinka” oo Far Carabi ah.
3. Heesta Qaranku waa mid muujinaysa bartilmaameedyada Dastuurka, caqiidada ummadda, hab-dhaqmeedka wadatashi; waxanay yeelanaysaa miyuusik u gaar ah oo ka duwan kuwa dalalka kale; waxaana lagu soo saarayaa xeer
4. Wax-ka-beddelka ama bedelaadda calanka, astaanta, iyo heesta qaranka, waxa jidaynaya go’aan Golaha Wakulada.
Soomaaliya waxaa ilaa maanta laga dhaqmaa Dastuuro ay ka mid yihiin kii 1960kii,kii Embagatti, iyo Dastuurka federalka (qabyo qoraalka ) oo sanadihii ugu dambeeyey howshii iyo murankiisuba socdeen,ilaa hadda aan la ogeyn in la ogolaan doono iyo in la diidi doono.Qodobada ugu horeeyana waxaa ka mid ah:-
Qodobka 4aad – Gobannimada Jamhuuriyadda
1. Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah.
2. Shacbiga Soomaaliya waa hal, lamana kala qaybin karo.
3. Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah.
Qodobka 6aad – Astaanka Qaranka
1. Calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyay qaybta A ee jadwalka koowaad, waalaydi buluug furan ah oo dhexda kaga taal xiddig cad oo shangees ah, madaxyo simanna leh.
2. Astaanta Jamhuuriyadda Soomaaliya, sida lagu muujiyey qaybta B ee jadwalka koowaad, waxay ka kooban tahay gaashaan buluug ah oo leh xiddaayad dahabi ah, dhexdana ku leh xiddig shangees ah oo dheeh qalin ah leh. Gaashaanka dushiisa waxaa ku yaal rurkumo carbeed oo xardhan, lehna shan madax oo dahabi ah oo labada geesba ku yaalliin ay kala qaaran yihiin. Hareeraha waxaa ka haya laba shabeel oo isu tusmaysan, kuna kala taagan labo waran oo isku weydaarsan caaradda hoose ee gaashaanka, ayna weheliyaan laba caleen-cawbaar, diillin cadna ay ku qoofalan tahay.
3. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa Heesta Qaranka.
4. Sharci gaar ah ayaa laga soo saarayaa billadaha sharafta.
5. Baarlamaanka ayaa soo saaraya sharciga maamuuska ay mudan yihiin calanka, heesta qaranka iyo billadaha sharata ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya.
1. Gobannimada Jamhuuriyadda soomaaliya waxay koobeysaa dhulka Jamhuuriyadda oo idil, oo ay ku jiraan berriga, jasiiradaha, biyaha goboleed, ururkooda, hawadooda iyo geyi-qaaradeedka.
2. Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo.
3. Guddoon afti Qarameed oo keliya ayaa lagu oggolaan karaa waxkabeddelidda dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Qodobka 8aad – Magaalo Madaxda Qaranka
1. Muqdisho oo loo yaqaanno Xamar waa Magaalo Madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maqaamkma Magaalo madaxdu ay ku leedahay qaabdhismeedka federaalka ee Jamhuuriyadda wuxuu ku xusan yahay Cutubka 7-aad ee Dastuurka.
“GOONI ISU TAAGA SOMALILAND WAA MUQADIS” “MIDNIMADA SOOMAALIYA WAA MUQADIS”
Haddal iyo dhamaan Dastuurada Somaliland iyo Soomaaliya, waxay sii adkeynayaan wada hadal iyo isu soo dhowaansho kasta oo dhexmari lahaa Somaliland iyo Soomaaliya.
Qaar ka mid ah wada hadaladii ugu caansanaa dunida:-
Marka laga hadlayo wada hadalo dhex maray laba Ummaddood ama laba Dowladood waxaa jira qaar tusaalle loo soo qaato. Qaybtan waxaan jecelahay in ku soo qaato, qaar ka mid ah wadamada amase Dowladaha ugu caansan dunida ee ay wada hadalo dhexmareen iyo weliba hadaladii ay yidhaahdeen hogaamiyayaashii Wadamadaasi, kuwa ugu caansana waxaa ka mid ah:-.
Madaxweynihii Masar:-Madaxweynihii hore Dalka Masar Md. Anwar Sadat –wuxuu yidhi mar uu la hadlayey Baarlamaanka (Knesset) wadanka Isreal :-“lacagta aynu hubka ku soo iibsano, waxaa fiican in aynu ku iibsano qalabka caafimaadka iyo qalabka Beeraha”. “ In aynu colaad ku wada noolaano waxaa ka fiican ,in aynu nabad ku wada noolaano. “Inaga ayaa heshiin karna—ee ma jirto cid kale oo ina heshiisiin kartaa” “Nabad ayaa idiinku imid ee idina iga aqbala nabada aan sido” “ Idinkama yeelayno in aad sii haysataan taako ka mid dhulka reer Masar”.
Madaxweynihii South Africa:- Madaxweyihii hore ee dalka South Africa Md.Nelson Mandela wuxuu yidhi—“ Dadka cadaanka ah ee ku dhaqan South Africa, waxay jeclahaayeen Midab kala sooco ,anaguna waan ka soo horjeednay,waanu diidnay” “anaguna waxaanu doonaynaa in Demuqraatiyada lagu kala baxo,laakiin cadaanku ma ogalayn sababtoo ah waxay ogaayeen in guushu anaga na raacayso” “Waxaa doonaynay in aanu si nabad ah ugu wada noolaan South Africa,horumarka shacabkayagana ka wada shaqayno”. “ Waxaanu ugu dambayntii isla garanay haddii aanu nahay Ummadda reer South Africa,ee midabada kala duwan leh,in dantu tu ku jirto wada noolaasho iyo nabad waarta” .
Hogaamiyii hore ee reer Palestine (Falastiin) :-Hohaamiyii hore ee Falastiin Md. Yaser Arafat wuxuu yidhi – “ Israel waxay diidan yihiin in ay ka kacaan dhulkii ay sida shrci darada ah ku qabsadeen —“Isreal waxay diidan tahay in ay bixiyaan wixii ay geysteen”,–Waxay Israel diidan tahay in aanu noqono, laba dal oo deris ah,kuna wada nool Bariga dhexe”—“ Marka aanu wada hadlayno Isreal (Yuhuuda),waanu ognahay in aanu wada hadlayno Wadanka dunida ugu xooga weyn oo U.S.A” “Haddii cida wada hadlaysaa ay yihiin Isreal iyo Palestine , beri hore ayaanu heshiis gaadhi lahayn—- waa nalagu dhex jiraa”.
Madaxweynaha Isreal :- Madaxweynaha Isreal Shimon Peris wuxuu yidhi —“ nabada Isreal iyo Palestine ay raadinayaan– waxay saran tahay Buur aad iyo aad u dheer dusheeda – anaga iyo reer Palestine qolaba dhinac ayey ka koraysaa ,si nabada looga soo qaado Buurta dusheeda– marba qaar inaga mid ah ayaa soo dhacaya ,iyagoon aan gaadhin halkii nabadu taalay—waxaan rajeynayaa in aynu maalin uun gaadhi doono” —“Isreal nabad bay rabtaa , Palestina nabad bay rabtaa laakiin haddana waxbaa naga qaldan—waanu garanaynaa ee waanu is yeelyeelaynaa”!!!
Madaxweynahihii hore ee Cuba :- Madaxweynihii hore ee dalka Cuba Md. Fidal Castro ,mar la weydiiyey “Haddii uu la kulmi lahaa Madaxweynaha Mareykanka,Wasiiradiisa Arimaha Dibada,Gaashaandhiga iyo la taliyaha Amaanka wuxuu yeeli lahaa,wuxuu ku jawaabay —-“marka hore waan soo dhoweyn lahaa , waanu wada fadhiisan lahayn ,shah ayaanu wada cabi lahayn—inta aanu shaaha cabayno waanu kaftami lahayn—markaanu Shaaha dhamaysano waxaanu shidan lahayn –Sigaarka Cuba caanka ku tahay—intaa ka dibna waxaanu ka wada hadli lahayn dantii ay iigu yimaadeen” “ Shacabka Cuba ayaa doortay sida ay u noolaanyaan—Maraykankuna nooma sheegi karo sida aanu u noolaanayno”.
Wasiirkii hore ee Arimha Dibada ee USA:- Wasiirkii hore ee arimaha dibada wadanka Maraykanka Md.James Baker mar la weydiiyey sababta Bariga dhexe nabad waarta loo waayey ,wuxuu yidhi “Anaga iyo dunida Carabta inteeda badani waxaanu isla fahmi weyna labada eray ee “ARGAGIXISO IYO XAQ U DIRIR– waxaanu ARGAGIXISO u naqaano ,wadamada Carabta qaarkood waxay u yaqaanaan XAQ U DIRIR”– halkaas ayaa ugu adag oo aanu is fahmi waynay—waan hubaa haddii eraygaa anuu isla fahmi lahayn in aanu hore u socon lahayn. – “Marka aan wada hadal ka qayb galayo waxaan jecelahay in aan marka horeba garanayo wixii aan doonaayey,– waxaan la soo tashaday Dowladayda ,–waa in aan go,aan qaadan karo—ma jecli in aan marba Telefoon diro amase dib ugu noqdo Washington”—“ Waxaan sii ogaadaa shaqsiyaadka iga soo horjeeda ,aanu wada hadlaynaa kuwa ay yihiin—aqoontooda –Siyaasadooda—waxay aaminsan yihiin sida ay u fahansan yihiin waxa aanu ka wada hadlayno iwm—-Tariq Aziz (Ciraq) wuxuu ka mid ahaa raggii iigu adkaa ee aan wada hadal la galo,wuxuu yaqaanay sida hadalka loo yidhaahdo-wuxuu yaqaanay sida Dunidan aynu ku nool nahay u qaybsan tahay,—-laakiin waxaa u talin jiray nin Keli taliye ah—- hadii kelitaliye ku xukumo ,markasta waxaa kugu adag go,aan qaadashada” .
.Madaxweynihii 1aad ee Somaliland:- Madaxweynihii ugu horeeyey ee Somaliland Md. C/raxman Axmed Cali – Tuur(naxariistii jano ILLAHAY ha siiyo),wuxuu yidhi — waa deg degaysaan –deg degnu ma fiicna,ee waxaa fiican in aanay dib u dhici wixii hore u dhacay—inagoo isku dhan reer Somaliland ayaa fiican in aynu Soomaaliya u tagno,oo wada hadalo—haddii aynu qaybsanaan ku tagno ama aynu isbarbar yaacno way inaga guulaysanayaan ,inagana waxaa inagu dhacaya wixii 60kii wax ka daran.
Madaxweynihii 2aad ee Somaliland: – Madaxweynihii 2aad ee Somaliland Md. Maxamed X.I.Cigaal (naxariistii jano ILLAHAY ha siiyee) wuxuu yidh — Way fududahay sida la idiin karbaashaa —–way howl yartahay sida hogaan la idiinku xidhaa.
Madaxweynihii 3aad ee Somaliland: – Madaxweynihii 3aad ee Somaliland Md.Dahir Rayaale Kaahin wuxuu yidhi — “Cidina ma dooran karto cid ay deris la noqonayso—ILLAHAY ayaa inagu wada abuuray geeska Africa –deris baynu nahay –derisku xaq ayuu isku leeyahay— adigu deriskaaga gacanta u tag—hadii uu doono isagu ha ku diidee”!!.
Abwaankuu weynaa ee Ibrahim Gadhle—ILLAHAY naxariisto jano ha siiyi isaguna wuxuu yidhi:-
“Taariikh da’ weynoo,
Aan idiin dul-xaadshee,
Shanta kala dab-raacdaa,
Dermo qudha ah u gogosheen,
Daacad baw horseeddeen,
Waxaan Daacad uga baxay,
Dhulku yaanu Daaliyo,
Dooloow u kala go’in,
Siday labada daamood,
Dab u wada kulaalaan,
Dibi keliday lay qalay,
Qoys qudh ah dibbiradii,
Duubiga shan lagu cuno.
Waa in ay noqdaan shaqsiyaad fahansan miisaanka arinta ay ka wada hadlayaan,”—waa Gobanimo–waa masiir Ummaddeed— waa mustaqbal Ummaddeed— waa Qarannimo—waa Dowladnimo-waa xuduudo bad,beri iyo cirba leh—waa Shuuruc Caalamai ah iyo mid maxali ahba-waa Siyaasad iwm.
Waa in ay yihiin shaqsiyaad Bulshada ay ka wakiilka yihiin taqaano, magac ku dhex leh ,ku qanacsan yihiin ,in ay ka soo bixi karaan howsha loo igmaday.
Waa in ay yihiin shaqsiyaad aqoon durugsan u leh,cida ay wada hadlayaan,dhaqan ahaan,degaan ahaan iyo guud ahaan sida ay u fekerayaan.(kuwa Somaliland –waa in ay aqoon fiican u leeyihiin Soomaaliya—kuwa Soomaaliya ka imanayaana waa in ay aqoon fiican u leeyihiin Somaliland).
Shaqsiyaadka ka qayb gelaya wada hadalka waa in ay noqdaan shaqsiyaad aan lagu aqoon isbedbedel—isrog rog – Diimeed,Siyaasadeed ,dhaqan .iyo dabeecadeed midna,si aan si howl yar looga leexin howshii loo igmaday.
Waa in ay yihiin shaqsiyaad waayo aragnimo badan u leh wada hadalada noocan oo kale ag,hore uga soo qayb qaatay wada hadalo noocan oo kale ah,hore uga soo qayb qaatay wada hadalo Diblamaasiyadeen oo miisan intan leeg amase u dhigma leh.
Ugu dambayntii waa in ay yihiin shaqsiyaad gaadhi kara go,aano lagu diirsado,lagu farxo,lagu nabdoo lagu negaado, labada shacab (Somaliland iyo Soomaaliyana),u horseedi kara nabad gelyo iyo naruuro waarta.
Qaybtan waxaan ku soo koobayaa “ Nin ka mid ah Siyaasiyiinta ugu magaca dheer Soomaaliya ayaa waxaa la weydiiyey —Maxay kula duwan yihiin Somaliland iyo Soomaaliya ?—wuxuu ku jawaabay –midna Talyaaniga ayaa Gumaystay—-midna Ingiriiska ayaa gumaystay!!!.
Shaqsiyaadka Ku haboon in ay Somaliland uga qayb galaan wada hadalka:-
Qayntii 7aad ee hore waxaan idiinku soo bandhigay 11kii qodob ee aan sheegay in looga baahan yahay in ay buuxiyaan shaqsiyaadka la doonayo in ay ka qayb galaan wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya. Haddaba markaan dhinac walba ka eegay shaqsiyaadka aan isleeyahay waxay ku haboonaayeen in ay Somaliland uga qayb galaan wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland waxaa laga soo dhex xuli karaa shaqsiyaadka magacyadoodu liiskan hoose ku qoran yihiin ,waa sida ay aniga ila tahay:-
Xaaji Cabdi Waraabe(Gudoomiye ku xigeenka Golaha Guurtida Somaliland)
Prof /Mj.C/Salan Yaasiin(Gudoomiyiih hore Jamacada Burco).
Prof Saleebaan Cawar (Gudoomiyaha Jamacada Amuud).
Prof. Bulxan (Gudoomiyii Hore Jamacada Hargeysa)
MJ.C/raxman Aw cali (Madax weyne ku xigeenkii hore Somaliland)
Mj. Xasan Ciise Jaamaca(Madaxweyne ku xigeenkii hore Somaliland)
Md/Amb. Awil Ducalle (Wasiirkii Hore ee Maaliyada Somaliland)
Md.Maxamed Xaashi ( Wasiirkii Hore ee Maaliyada Somaliland)
Md. Maxamed Saciid Gees – Gudoomiyaha-( Academy for peace and Development-Hargeysa,Wasiirkii hore Wasaarada Arimha Dibada Somaliland.
Md. Fuaad adan cade (Wasiir Hore Somaliland )
Md. Cali Sandulle- Wasiir hore — Gudoomiye Ku.Xigeenka Urur Siyaasadeedka XAQSOON.
. Dr.Gaboose .Wasiirkii Hore ee Arimaha Guddaha.
Faysal Cali Waraabe (Gudoomiyaha Xisbiga UCID)
Md. Boobe Yusuf Ducaalle ( Wasiirka Warfaafinta Somaliland xilligan)
Md. Cabdiqaadir Jirde(Gudoomiye ku. Xigeenkii hore Golaha wakiilad Somaliland).
Marwo .Adna Adaan.(wasiirkii Hore Arimaha Dibada Soamaliland).
Md.Adan Muuse Jibriik ( Wakiilkii hore ee Somaliland Uk).
18. Wasiirka Arimaha Dibada ee xilligan waxaa odhan lahaa ,wuxuu ku haboon yahay in uu noqdo (Xoghaynta waftiga Somaliland uga qayb gelaya wada hadalka soomaaliya.
Hadal iyo dhamaan waan hubaa in aanay halkan ku dhamayn aqoon yahankii/Siyaasigii iyo waxgaradkii reer Somaliland,balse waxaan halkan idinku soo qoray shaqsiyaad aan isleeyahay, guul weyn ayey ka soo hoyn lahaayeen wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya,marka laysku daro aqoontooda,waayo aragnimadooda iyo sida ay Somaliland ugu daacada ugu yihiin.
Aqoonta aad u leedahay shaqsiyaadka aad wada hadlaysaan:
Waa muhiim in aad aqoon fiican u leedahay shaqsiyaadka ka socda cida wada hadalku idin dhexmarayo.Arimaha loo baahan yahay in aad wax ka ogaato inta aadan wada hadalka tegin waxaa ka mid ah,sida aqoonta ay u leeyihiin Somaliland,sida ay u fahansan yihiin taariikhda Somaliland iyo Soomaaliya sidii ay isu yimaadeen,mudadii ay Siyaasada ku jireen.miisaanka Siyaasadeed ee ay ku leeyihiin Shacabka ay ka socdaan,Dowlada ay ka socdaan iwm.
Haddii aad aqoon fiican isu leedihiin waxaa inta badan dhib yaraanaya isla rogrogista arinta aad ka wada hadlaysaan,waxaa sahlan in aad si fudud isula fahantaan arimaha aad ka wada hadlaysaan,waxaa dhibyaraanaysa in aad wada gaadhi kartaan heshiis buuxa.
Haddiise ayadan aqoon fiican u isu lahayn waxaa mar kasta adag isfahankiina iyo fududaanta wada hadalka idin dhex maraya.
Daraasado dhamaystiran oo laysula yimaado:-
Marka laga hadlayo daraasad buuxda ,waxaa muhiim ah in dhowr arimood hore daraasad buuxa hore loogu sii sameeyo ,waxaa ka mid ah:-
Waa in ay jirtaa Cilmi baadhis buuxda oo lagu sameeyo wixii faaiido iyo qasaare lagala kulmay Midowgu Somaliland iyo Soomaaliya ee 1960.
Waa in ay jiraan wax la taaban karo oo qolo waliba soo daliishanayso/markhaati ka dhigaynayso sida Film—Suugaan–Daraasado lagu kalsoonaan karo IWM
Dad goob joogayaal ahaa kana markhaati kacaya wixii dhacay,haddii loo baahdana la horkeeni karo Gudiyada wada hadlaya .
Waxaa fiican in haddii la heli karo aad sii xuuraanto,xogagaal u sii ahaato mowqifka ay taagan yihiin Dowlada aad wada hadlaysaan,waxaa fiican in aad xog ka sii hayso qoodobada adag iyo ku sahlan ee ay wataan Dowlada aad wada hadlaysaan si ay kuugu dhib yaraato in aad u sii tabaabushaysato,oo aanay hadhow naxdin kuugu noqon.
Waajibaadka ku saran waxaa loola jeedaa masuuliyadii ay kuu soo dhiibeen Shacabka aad wakiilka ka tahay,Dowlada aad ka tirsan tahay iyo Shuruucda wadan ka aad ka socoto.Inta badan Waajibaadka waxaa ku soo siinaya Dowlada aad ka wakiilka tahay oo iyaduna ka sii wakiil ah Shacabkii iyo Shuruucdii wadanka.Waxaa ka mid ah waajibaadkaaga in go,aanka aad gaadhaysaa uu noqdon mid raali geliya Dowlada –Shacabka iyo Shuruucdii aad ka wakiilka ahayd, waa in aad ogsoon tahay miisaanka iyo mudnaanta ay leedahay wada hadaladan aad ka qayb qaadanaysaa.
Shaqsiyaadka isbedelka badan looma dirto wada hadalada:-
Shaqsiyaadka isbedelka badan waxaa loola jeedaa shaqsiyaadka Siyaasadooduna aanay lahayn meel loogu soo hagaago–aan lahayn Siyaasad degan—Shaqsiga marba Maamul ku biira—Shaqsiga marba Xisbi ku biira iwm.
Runtii shaqsiyaadka noocaas ahi waxay aad iyo aad halis ugu yihiin in aanay gudanin howshii shacabku u igmaday,waxay halis u yihiin in si dhib yar loola heshiiyo. Ugu dambayntiina way dhib yar tahay in XIL IYO XOOLO mid uun loo balan qaado oo ay ka mid noqdaan amase raacaanba kuwa kaa soo horjeeda .
Runtii dad aan sidaa u badaneyn ayaa ka soo jawaabay suaasha ah- “SOMALILAND IYO SOOMAALIYA MAXAY KU KALA DUWAN YIHIIN”? Fadlan bal mar kale isku daya in aad jawaab buuxda u heshaan suaashaas,haddii aad garato jawaabta ,markaas waxaa kuu dhib yaraaneysa in aad fahanto waxa Somaliland iyo Soomaaliya isku hayaan iyo sidii ay kala bixi lahaayeen.
Isu tanaaulka waxaa loola jeedaa isfahan dhex mara labada garab ee wada hadlaya,waxaa loola jeedaa in go,aan laga gaadho qodobada lagu kal duwan yahay,waxaa loola jeedaa in ay isu soo debcaan labadii garab,dhinac isaga riixaan wixii ay ku kala duwan yihiin.
Qaybtan aynu kaga hadlayno “isu tanaasulka “,waa qaybta ugu adag wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya,waa qodobada keeni kara in la heshiiyo iyo in lagu kala kaco wada hadalada Somaliland iyo Soomaaliya, waa meelaha loo baahan yahay in aad iyo aad looga taxadiro,waa meelaha u baahan in ay rogrogaan shaqsiyaad aqoon iyo waayo aragnimo fiican u leh Siyaasada Soomaaliya iyo tan Geeska Africa,waa qoodobada aad guul waarta kula soo noqon karto shacabkii ku dirtay amase guul daro aanad ka soo waaqsan.
Qodobkan tanasulku waa furaha is afgarashada labadii dhinac ee wada hadlayey, haddii uu tanaasul yimaadana qodobka ku xigaa waa in aynu heshiis rasmi ah kala saxeexano,halkaasna waxaa ku dhamaanaya dhamaan wixii la kala tirsanayey,la kala tabanayey,kala haystay iyo dhamaanba xurgufihii jiray.
Qodabada tanaasulkoodu aad u adag yihiin waxaa ka mid ah:-
“Gooni isu taaga Somaliland waa muqadis iyo Midnimada Soomaaliya waa muqadis”—labadan keebaa laga tanaasulayaa, ma Somaliland baa tanaasulaysa mise Soomaaliya ?
Wixii dhib soo kala maray Somaliland iyo soomaaliya 1960 ilaa 1991 sidee looga wada hadlayaa,yaa ka bixinaya garowsho ma shicibka mise Dowladaha hadda jira ?
Federaalka maxaa loola jeedaa ma Somaliland iyo Soomaaliya ayaa federal nooqonaya mise Koofurta Gaalkacayo iyo Woqooyiga Gaalkacayo ?,Jowhar iyo Marka,Bedelweyn iyo Dhuusa-ma reeb iwm
Ma Somaliland iyo Soomaaliya ayaa wax loo qayb sanayaa mise 4.5 amase 5 ?
Astaamaha Qarannimo sida “ Dowladnimada – Shuruucda- Jinsiyada – iyo dhamaan astaamaha ay leeyihiin laamaha Dowladu, suaashu waxay tahay ma waxa la qaadanayaa Astaanta Somaaliya mise Astaanta Somaliland ?
Gobolada dalka ,misa gobol ayuu dalku noqonayaa ,xagee Caasimad u noqonaysa,shuruucda Caasimada,markaa Somaliland ma 6 gobol bay noqonaysaa mise 2 Gobol iwm ?
Hayadaha sharciga sida Baarlamaanka iyo Maxkamadaha sidee loo qaybsanayaa ma Somaliland iyo Soomaaliya mise si ka duwan ?
Awooda Dowlada –Madaxweynaha –Ku xigeenka—Gudoomiyaha Baarlamaanka –Maxkamadaha— Ciidamada— Wasaaradaha muhiimka ah side loo kala qaadanayaa ma Somaliland iyo Soomaaliya mise si kale oo ka duwan ?
Mashaariicda horumarinta side loo qaybsanayaa ?
Intaas oo qodob iyo runtii qaar kale oo badani waxay u baahan yihiin shaqsiyaad aqoon dheer u leh sidii loo rogrogi lahaa,waxaa aad iyo aad u adag sida tanaasul looga samayn karo , waana qodobada ugu adag wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya.
Hadal iyo dhamaan dad badan ayaa qaba in ay fudud yihiin wada hadalada dhexmari doona Somaliland iyo Soomaaliya,dad badan ayaa qaba in ay si fudud ku dhamaan doonaan,dad badan ayaa aaminsan in aanay muhiimba ahayn qodobadan aan ka hadlayaa,qaar waxay rumaysan yihiin haddii Soomaaliya hagaagto in Somaliland si dhaqso ah ugu soo biiri doonto Soomaalida kale –ILLAHAY ayuun baa og sida arimuhu ku dhamaan doonaan. ALLAA MAHAD LEH.
Abdi M. Saleiman (Mingiste)
Political Analyst abdi_saleiman@hotmail.com Поделиться в соц. сетях
Opinion M-weyne ku xigeenka JSL iyo Waftigiisii waxay Muujiyeen Xil-Gudasho la yaab leh, May 25, 2013
Waa yaabe xukuumadda Kulmiye maxaa qidhim ka siiyay May 24, 2013
The East Coast Community (FL,GA,SC NC ,VA,DC,Md,Nj,and NY) would like to invite you and your family to their annual Independence Day celebration this yea May 24, 2013
Alle Darti u Caawi Alle ha kuu Gargaaro If Iyo Aakhirabee Qoys u Baahan Caawimo May 24, 2013
Ham balyo Aroos Wacan Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac iyo Naciima Mahdi Buubaa May 24, 2013
Waa qaybtii labaad ee aynnu ku eegaynnay Waayaha Nololeed ee Wasiirka Madaxtooyada Somaliland, waxaana socda qayb ka mid ah halgankii SNM iyo goob-jooggiisii shakhsi ahaaneed May 24, 2013
Nuxurka Dhambaalkii Rashiid Yuusuf Dhuxul + Dhawaaqi Madax Dhaqameedka Habaryoonis Iyo Balan Qaadkii Taliyaha Ciidamada Qaranka Somaliland May 24, 2013
Hambalyo Meher Mudane Faysal Cali Dabshid & Marwo Kaltuun Xasan Maxamed May 24, 2013
Faallada HUBAAL: Sicir Bararka Dabrka Goostay Waxa Sababay Madaxada Baanka Dhexe May 24, 2013
Dan iyo Ha u Gelin Muraad Maanso Xirsi iyo DeelayAli Jama May 23, 2013
Jacaylkii Tahriibay ..Maansadani waxa ay ka hadlaysaa qiso ka dhacday magaalada Hargeisa May 23, 2013
Wasiir Xirsi Oo Ka Warramay Halgankiisii SNM iyo Waayihiisa Nololeed (1) May 23, 2013
Badhasaabka Gobolka Saaxil Oo Si Indho La’aan Ah U Wadda Qorshaha Isiraysan Ee Xukuumada Siilaanyo Ka Waddo G.Saaxil May 23, 2013
Gabay Baa Ihaya !! Cumar Seerbiya‏ May 23, 2013
Taariikh Muuqaallo Cusub oo Ka Mid Ah Dabaal-deggii 18 MAY ee Jaalliyadda Australia + Xisbiga UCID Oo Taageero Ballaadhan Ka Helay Reer Sydney May 24, 2013
Xafiiska Socdaalka Uk Oo Digniin Culus U Jeediyay Muwadininta Britain Inanay U Safrin Swedan May 24, 2013
Daawo Hees Deganay Hargeysa Ereyada Abwaan Maxamed C/qaadir Colhaye Laxanka iyo Musica Maxamed Cabdi Alto Luuqda Kooxda Hidaha iyo Dhaqanka SOCSA May 24, 2013
DG-ga Raad Baradka Ah ee Warfaafinta oo Sabab La’aan Ugu Awood Sheegtay Abwaan Tiir-dhexaad U Ah Wasaaradda & Shaqaale Kale oo Rasmi Ah (Permanent) May 24, 2013
Daawo Hees Wadaniya Dhaadasho Ereyada Abwaan Maxamed C/qaadir Colhaye Laxanka iyo Musica Maxamed Cabdi Alto Luuqda Kooxda Hidaha iyo Dhaqanka SOCSA May 23, 2013
English News The Norwegian connection on the politics of Oil between Somalia and Somaliland. May 24, 2013
Somalia celebrates the 50th Anniversary of the OAU in Mogadishu May 23, 2013
Prime Minister welcomes progress in parliament and outlines road ahead on Jubaland and Somaliland May 23, 2013
Southwark announces its new mayor May 23, 2013
进一步索马里兰共和国的国际社会的支持和帮助它得到国际承认 May 19, 2013
Xulashada Togaherer Dhegayso Barnaamij Gaar ah oo aanu Idiinka Diyaarinay Maalinta 18 May oo Ah Maalin Taariikhi ah oo ku Suntan Quluubta Shacbiga Jamhuuriyadda Somaliland Waxa inoo Daadihinya Mawliid Maxamed iyo Maxamed C/laahi May 17, 2013
Shakhsiga Looga Shakisan Yahay Shirqoolkii HUBAAL Oo Gabbasho La’aan U Muujiyey Kalsoonida uu Ka Haysto Md. Siilaanyo. BAL EEGA SAWIRRADAN May 7, 2013
Illaahay Dartii u Caawi Hooyo Ifraax waa Hooyo Soomaaliyeed oo u baahan in laga Caawiyo Wiil ay Dhashey oo u baahan Caafimaad Dibadda ah April 18, 2013
RADIO TOGAHERER DHEGEYSO: Suxufi Ka Tirsan Bahda Togaherer Oo Araga Naafo Ka Ah Iyo Mucjisada Barnaamijyo Xiiso Leh oo uu Soo Saare Ka Yahay March 15, 2013
Juma Speech Fadiilatu Sh. Osman Ali Huseinالجمعة 3 جمادي الأول 1434هـ – 15 مارس 2013م	Literature and Special Events By: Togaherermedia	TV Togaherer: Xafladii 18 May 2013 Ee Magaalada Oslo + Shabackii tirada Badnaa Ee Ka soo Qaybtay Dabaldega.
Copyright © 2005 - 2013 Togaherer.com ®All rights reserved. Designed by Ramaas Software Halkan Riix Toggaherernews